Mini FootBall dia manana ny sasany amin'ny votoatin'ny baolina kitra izay resin'ny sasany | Androidsis
Dribble ary tanjona ny tanjona amin'ny Mini Football ary ny fusion miaraka amin'ny freemium madio
Mini FootBall dia mitondra antsika any amin'ilay hamafiny sy farango izay mitondra anao amin'ny ekipanao mba hahafahanao manao dribble, misokatra ary mitifitra ny tenanao amin'ny tanjona mba hamonoana tanjona iray miaraka amin'ireo mpilalaoo, fa amin'ny zava-drehetra mifandraika amin'ny freemium sy ireo boaty fandrobana.
Ary ny tena mandeha tsara, fa tadidio foana fa manokatra boaty loot ianao hanatsarana ny mpilalao amin'ny karatra. Mety aminao ve izany? Raha izany dia hanana lalao mandritra ny herinandro maro ianao, satria ny lalao ataon'izy ireo dia mihaona betsaka hahatratrarana ny tanjona betsaka indrindra. Ataovy.
1 Soccer tena izy
2 Ny freemium manoloana ny Mini FootBall
3 Miaraka amin'ny vondron'olona mpilalao
Soccer tena izy
Miaraka amin'ny Mini FootBall izahay andao handeha efa ho folo taona lasa izay ahafahantsika mamindra ilay mpilalao hanokatra toerana malalaka ary afaka nitifitra tsara tamin'ny tanjona isika mba hamonoana tanjona, dia ampy noho ny ampy izany. Azontsika atao ny mahatadidy ny Soccer Sensible goavambe sy ny fahombiazany tamin'ny taona 90. Fa mazava ho azy fa fotoana hafa izy ireo ary efa afa-po tamin'ny kely ianao.
Androany dia nanjary zava-misy tokoa ny lalao baolina kitra Namoy ny sasany amin'ny fotony izy ireo ary indraindray mankaleo be mihitsy. Eto amin'ny Mini FootBall dia manana zavatra tamin'ny andro taloha isika saika toa ny lalao amin'ny mpiara-mianatra amintsika rehefa nitondra baolina kitra ny iray tamin'izy ireo.
Tafintohina, mandaka ary mikorontana isan-karazany, nefa mihantona handeha milalao lalao iray hafa mba hahazoana ny lalao ary manomboka mamono tanjona maro. Toy izao no hiraina ny feon-kira tsara indrindra amin'ny voalohany hanatsarana ny ekipanay.
Ny freemium manoloana ny Mini FootBall
Mazava ho azy, freemium ny ankehitriny dia rafitra fanangonam-bola Fantatry ny mpamorona fa rehefa manana mpihaino na mpilalao ampy ianao dia miteraka fidiram-bola. Ary eto no hanombohantsika miatrika sakana. Nahafinaritra anay ny nilalao baolina kitra Mini FootBall, saingy avy eo dia efa ananantsika ireo boaty fandrobana amin'ny zavatra rehetra miaraka aminy.
Tsy tokony hofitahina isika fa na dia Maradona an'i Naples aza isika dia hisy ny karatra sy fetrany tsara kokoa mba tsy afaka manatsara ny mpilalao sy ny majika isika ny mpanohitra dia manome isa iray isaky ny tifitra. Eo no miditra ny fetra sy ny fantatry ny freemium.
Saingy miaraka amin'ireo, ampifandraiso ity lalao navoakan'ny miniclip.com ity. Mijanona ho antsika ny hahafantatra hoe hanao ahoana izany rehefa manana ambaratonga avo kokoa isika ary sendra ilay nilaza fa misy ekipa tsara kokoa. Ary marina ihany koa fa amin'ny lalao dia tsy AI ny tsara indrindra, saingy manana ambaratonga ampy hangalarana ny baolina ary manao hadalana mihitsy aza isika; raha ny marina, amin'ireo fihaonana 30 dia heveriko fa nitsiatsiaka indray mandeha ny mpitsara.
Miaraka amin'ny vondron'olona mpilalao
Rehefa nihaona tamin'ny Mini FootBall izahay, toy ny izay vao haingana niaraka tamin'ny simulator hafa ary manana kalitao be dia be koa io, efa misy asehoy ny vondron'ireo mpampiasa izay mankafy anao. Izany rehetra izany dia noho ianao afaka mamoha fanokafana vaovao, baoty manokana, mahafeno fepetra ho an'ny ekipa nasionaly 30 sy ireo singa fanampiny rehetra izay miasa tsara amin'ny freemium.
Amin'ny lafiny teknika dia tsara be izany amin'ny tsy fisian'ny hakingan-tsaina artifisialy nohatsaraina rehefa miatrika izany isika. Eny, marina fa manana dinamisme be dia be izy ary milalao ara-potoana ny lalao. Azontsika haingana ilay izy ary manana mpilalao afaka mitifitra tanjona tsara isika. Ny endrik'izy ireo dia tsy hoe izy no tsara indrindra, indrindra eo alohan'izay rehefa mahatratra tanjona izy ireo, saingy amin'ny ankapobeny dia lalao baolina kitra tsara izany. Manana izay very FIFA sy PES.
Mini FootBall dia misy boaty freemium sy fandrobana be dia be, saingy manana zava-baovao ao amin'ny lalao izay ahafahantsika milalao tsirairay avy handroso tsara. Aza mangataka andro, ary manaova fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny ekipanao, filaharana ary mpilalao. Mahatsapa baolina kitra ianao hatramin'ny voalohany.
Miaraka amin'ny votoatin'ny filalaovana baolina kitra, dia misy freemium be dia be hanantonana anao.
Mahafinaritra ny mitarika ny ekipanao mankany amin'ny fandresena
Mandeha haingana ny fotoana
Indraindray miadana i AI
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Dribble ary tanjona ny tanjona amin'ny Mini Football ary ny fusion miaraka amin'ny freemium madio
Ahoana ny fampiasana Microsoft Teams ho an'ny antso sy resaka amin'ny Android